Patent cusub oo lagu cabiro cadaadiska dhiigga ee Apple Watch | Waxaan ka socdaa mac
Patent cusub oo lagu cabiro cadaadiska dhiigga ee Apple Watch
Ma garanayo inta jeer ee aan horey u iri in Apple Watch aniga yahay, laga yaabee inuu yahay aaladda ugu wanaagsan ee sumadda Mareykanka. Waa, ugu yaraan marka la eego dabacsanaanta. Taasi waa, badeecad si ku talagal ah loo bilaabay oo isu bedeshay wax aad u adag oo waxtar badan leh. Waxaan ka gudubnay awood u lahaanshaha akhrinta fariimaha ama kajawaabida wicitaanada in nala kormeero iyo badbaadi nolosheena mahadsanid dareemayaalkeeda. Sidaa darteed, waxay rabaan inay hal talaabo hore u qaadaan iyo tan awood u yeesho inaad cabirto cadaadiska dhiigga. Uguyaraan tani waa tan patent-kaani muujinayo.
Codsi patent cusub, daabacay dhawaan show a qalab la gashado, oo lagu daro Apple Watch, kaas oo awood u yeelan kara inuu kormeero cadaadiska dhiigga isticmaalaha iyadoo aan loo baahnayn qalab dheeri ah. Tani waxay u oggolaan kartaa dadka isticmaala inay cabbiraan cadaadiska dhiigga iyagoo isticmaalaya shabakadaha dhexdhexaadka ah iyo xogta seismocardiogram, iyadoon loo baahnayn cabbirka cadaadiska dhiigga. Cajiib!
Un hoosaad: Ma ogtahay, fikrad ma ka heli kartaa waxa ay noqon karto markii nidaamkan si wanaagsan loo hirgaliyo? Si kale haddii loo dhigo, ka fikir daqiiqad ah, sida Maraykanka oo kale, waxaan ku xirnahay dhakhaatiirteena iyadoo loo marayo aaladda casriga ah. Natiijooyinka cabirradan ayaa si otomaatig ah loo soo dhejiyaa illaa iyo inta aysan jirin wax war ah, waa la keydiyaa. Laakiin haddii ay jirto wax aan caadi ahayn, digniin ayaa u boodaysa dhakhtarka kaas oo dib u eegi kara taariikhda oo dhan isla markaana samayn kara go'aan ka hortag ah. Kahortag, oo ah erayga sixirka nolosheena intiisa badan, laakiin caafimaadka waxay ku qaadataa muhiimad aad u badan.
Codsiga shatiga, oo cinwaankiisu yahay "Shabakadaha neerfaha ee la turjumi karo ee qiyaasta cadaadiska dhiigga oo aan lahayn xirmo«. Baadh adeegsiga shabakadaha neerfaha si loo qiyaaso dhiig karka adoo isticmaalaya xogta seismocardiogram. Si ka duwan sida elektrokardiogram-ka, oo ku tiirsan calaamadaha korantada si loola socdo heerka garaaca wadnaha, seismocardiogram wuxuu cabiraa gariirrada yar-yar ee ay soo saarto garaaca wadnaha.
Waxaa jira qalab loogu talagalay seismocardiogram yar oo loo arko in la qaadan karo. In kasta oo nidaamyadan xasaasiga ah sida caadiga ah lagu dhejiyo xadka dhabarka isticmaalaha si loo cabbiro gariirka yaryar ee wadnaha ama agtiisa. Qaabka ay Apple ugu talagashay inay ku hirgeliso aaladda noocaas ah laguma daboolin arjiga shatiga.
Codsiga waxaa lagu xusay in heerarka waxqabad ee hal ama in ka badan miirayaasha shabakadda neerfaha ugu horreeya la go'aamin karo. Xisaabi ku-xirnaanshaha mid kasta ama in ka badan oo miiraha shabakadda neerfaha ee ugu horreeya iyadoo lagu saleynayo heerarka dhaqdhaqaaqa ee miirayaashaas. Kadibna shabakad labaad oo neerfaha ah ayaa lagu dhisi doonaa iyadoo wax laga beddelayo tan hore. Sidan oo kale, xogta labaad ee la helay waa la falanqeyn karaa. Waxay ka faa'iideysan laheyd shabakad dhexdhexaad ah oo shaqsi ahaan la jarjaray oo aqbalaysa seismocardiogram sida wax ku biirinta. Shabakadaas neerfaha Waxaan u isticmaali lahaa xogta si aan u qiyaaso cadaadiska dhiigga.
Weligeen kuma arki karno qalabkan suuqa dhexdiisa ama waan arki karnaa
Waa inaad maskaxda ku haysaa taas waxaan ka hadleynaa shatiyada sidaa darteedna waxay u badan tahay inaan waligood ku arki doonin qalabkan suuqa. Xaqiiqdii, waxay haysataa fursad wanaagsan haddii aan aragno, waxay nagu qaadan doontaa sanado badan inaan aragno. Haddii aysan Apple dooneynin inay si dhakhso leh u dedejiso hawsha, taas oo aan shaki ku qabo jidka, inta badan maxaa yeelay fikraddu waxay horeyba u jirtay dhowr sano. Laakiin adigoon ku soo bandhigin arjiga foomka iyo meesha qalabkaas ku xirnaan doono Apple Watch, waxay iga dhigeysaa inaan u maleynayo inay weli dhammaantood dhammaantood xiran yihiin.
Waxaan rajeynayaa inay helaan, sababtoo ah runti waxaan u maleynayaa taas waxa ugu muhiimsan ee aan haysanaa waa caafimaadka waana inaan daryeelno. La'aantiis ma awoodi karno in aan sameyno waxyaabo kale waxaanan tixraacayaa tijaabooyinka waxa adduunka oo dhan ka dhacaya sababo la xiriira cudurka faafa ee uu sababay Coronavirus. Kala duwanaanta Apple Watch, horumarka caafimaad ee muhiimka ah ayaa lagu gaari karaa, ugu yaraan dhinaca cabbiraadaha shaqsiga, had iyo jeer maskaxda ku haysa, dabcan, in tarjumaadooda ay tahay inay fuliyaan xirfadlayaal.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Patent cusub oo lagu cabiro cadaadiska dhiigga ee Apple Watch
Sidee cudurka safku u bedelay habka aad uga shaqeyso taxanaha Mythic Quest
Shaqaalaha Apple ee California waxay ka talaalaan COVID-19 shirkada